ဥရောပ နိုင်ငံတွေမှာ ပူးတွဲ ကျင်းပမယ့် ယူရို ၂၀၂၀ ပြိုင်ပွဲ
ဥရောပ နိုင်ငံတွေမှာ ပူးတွဲ ကျင်းပမယ့် ယူရို ၂၀၂၀ ပ...
17 พ.ย. 2562 - 19:49 น.
နိုင်ငံပေါင်း ၁၂နိုင်ငံမှာ ပထမဆုံး အကြိမ် ကျင်းပမယ့် ယူရို ၂ဝ၂ဝ
ယူရို ၂ဝ၂ဝ ပြိုင်ပွဲကြီးကို လာမယ့်နှစ် ဇွန်လ ၁၂ရက်နေ့မှာ ဥရောပက နိုင်ငံ ၁၂နိုင်ငံနဲ့ မြို့ကြီး ၁၂မြို့မှာ ကျင်းပ ပြုလုပ်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ သမိုင်းတစ်လျောက် ကျင်းပလာခဲ့တဲ့ ယူရိုပြိုင်ပွဲကြီးတွေထဲ ပထမဆုံးအကြိမ် နိုင်ငံတွေ အများကြီးမှာ ကျင်းပမှာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ၁၉၆၀ခုနှစ်က ပြင်သစ်နိုင်ငံမှာ စတင်ခဲ့တဲ့ ဥရောပ ဖလားပြိုင်ပွဲကြီးမှာ ဆိုဗီယက်ယူနီယံအသင်းက ပထမဆုံး ချန်ပီယံဖြစ်ခဲ့တဲ့ အသင်းပါ။ အဲ့ဒီတုန်းက နာမည်ကြီးနေတဲ့ ယူရိုဆလားဗီးယားအသင်းကို အချိန်ပိုမှာ နိုင်ခဲ့ပြီး သမိုင်းတစ်လျောက် ချန်ပီယံဆုဖလားကို ပထမဆုံး ကိုင်မြှောက်ခွင့်ရတဲ့ အသင်းဖြစ်လာခဲ့တာပါ။ အဲ့ဒီနောက် ၄နှစ် တစ်ကြိမ် ကျင်းပလာခဲ့တာ အခုဆိုရင်တော့ ၁၆ကြိမ်မြောက်ကို ရောက်လာတော့မှာပါ။
ပုံမှန်အားဖြင့် အိမ်ရှင်အဖြစ် တစ်နိုင်ငံတည်းကသာ ပြုလုပ်လာခဲ့တဲ့ ယူရိုပါပြိုင်ပွဲကြီးကို ၂၀၀၀ခုနှစ်မှာ ဘယ်ဂျီယံနဲ့ နယ်သာလန်၊ ၂၀၀၈မှာ သြစတြီးယားနဲ့ ဆွစ်ဇာလန်၊ ၂၀၁၂မှာ ပိုလန်နဲ့ ယူကရိန်းတို့က ပူးတွဲအိမ်ရှင်အဖြစ် ကျင်းပခဲ့ကြပါတယ်။ လာမယ့် ယူရို ၂၀၂၀ ပြိုင်ပွဲကြီးမှာတော့ ဥရောပ ဘောလုံး အဖွဲ့ချုပ် UEFA က အရင်တုန်းက ပြိုင်ပွဲတွေထက် ပိုပြီး စိတ်ဝင်စားမှု ရအောင် အိမ်ရှင် နိုင်ငံတွေ အများကြီးနဲ့ စီစဉ်ခဲ့ပါတယ်။ ပြိုင်ပွဲဝင် အသင်းကိုတော့ ပြီးခဲ့တဲ့ ယူရို ၂၀၁၆ တုန်းကလိုပဲ ၂၄သင်းနဲ့ ကျင်းပမှာဖြစ်ပေမယ့် အိမ်ရှင်အဖြစ် ၁၂နိုင်ငံကို ကျင်းပခွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။
အုပ်စုပွဲစဉ်တွေ ကျင်းပမယ့် နိုင်ငံများ
အုပ်စု A ( အီတလီ၊ အဇာဘိုင်ဂျန်)
အုပ်စု B ( ရုရှား၊ ဒိန်းမတ်)
အုပ်စု C ( နယ်သာလန်၊ ရိုမေးနီးယား)
အုပ်စု D ( အင်္ဂလန်၊ စကော့တလန်)
အုပ်စု E ( စပိန်၊ အိုင်ယာလန်)
အုပ်စု F ( ဂျာမနီ၊ ဟန်ဂေရီ)
စပိန်အသင်းဟာ ယူရို ပြိုင်ပွဲ သမိုင်းတစ်လျောက် ၂ဝဝ၈နဲ့ ၂ဝ၁၂မှာ ဆက်တိုက် ဗိုလ်စွဲဖူးတဲ့ ပထမဆုံး အသင်းပါ။
တကယ်တော့ လာမယ့်နှစ် ယူရိုပြိုင်ပွဲကို အိမ်ရှင်အဖြစ် ကျင်းပခွင့်ရမယ့် နိုင်ပေါင်း ၁၉ နိုင်ငံက လျောက်ခဲ့ကြပြီး အဲ့ဒီထဲကနေ ၁၂နိုင်ငံကို ပြန်လည်ရွေးချယ်ခဲ့တာပါ။ အုပ်စု ပွဲစဉ်တွေကနေ ဗိုလ်လုပွဲအထိ ပွဲပေါင်း ၅၁ပွဲ အထိကျင်းပမှာဖြစ်လို့ ပြိုင်ပွဲကျင်းပခွင့်ရတဲ့ နိုင်ငံ ၁၂နိုင်ငံကို အချိုးကျ ခွဲပေးခဲ့ပြီး ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ အုပ်စု၊ ရှုံးထွက်နဲ့၊ ကွာတားဖိုင်နယ်ပွဲတွေကို နိုင်ငံစုံမှာ ကျင်းပကြမှာဖြစ်ပေမယ့် အဖွင့်ပွဲနဲ့ ဆီမီးဖိုင်နယ်၊ ဖိုင်နယ်ပွဲတွေကိုတော့ အီတလီနဲ့ အင်္ဂလန်နိုင်ငံတွေမှာ ကျင်းပမှာပါ။
အဖွင့်ပွဲကိုတော့ လာမယ့်နှစ် ဇွန်လ ၁၂ရက်နေ့ အီတလီနိုင်ငံ ရောမမြို့က အိုလံပစ် ကွင်းကြီးထဲမှာ ကျင်းပမှာဖြစ်ပြီး ခြေစစ်ပွဲ အောင်ထားပြီး ဖြစ်တဲ့ အီတလီက စတင် ကန်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဆီမီးဖိုင်နယ် ၂ပွဲနဲ့ ဖိုင်နယ်ပွဲကိုတော့ အင်္ဂလန်နိုင်ငံ၊ လန်ဒန်မြို့က နာမည်ကျော် ဝင်ဘလေကွင်းကြီးမှာ ကျင်းပမှာဖြစ်လို့ အင်္ဂလန် အသင်းအတွက်လည်း ဆီမီးတက်ခဲ့ပါက အိမ်ရှင် အားသာချက်ရနိုင်မှာပါ။
ပေါ်တူဂီ အသင်းကတော့ လက်ရှိ ယူရို ချန်ပီယံ အသင်းပါ။
ယူရို ၂၀၂၀ အိမ်ရှင်များ
ဝင်ဘလေကွင်း ( အင်္ဂလန်၊ လန်ဒန် ) - အုပ်စု၊ ရှုံးထွက်၊ ဆီမီး၊ ဖိုင်နယ်
Stadio Olimpico ( အီတလီ၊ ရောမ) - အဖွင့်ပွဲ၊ ကွာတား
ဘာကူ အိုလံပစ်ကွင်း ( အဇာဘိုင်ဂျန်၊ ဘာကူ ) - အုပ်စု၊ ကွာတား
Krestovsky Stadium ( ရုရှား၊ စိန့်ပီတာစဘတ်) - အုပ်စု၊ ကွာတား
Allianz Arena ( ဂျာမနီ၊ မြူးနစ်) - အုပ်စု၊ ကွာတား
ပါကန်ကွင်း ( ဒိန်းမတ်၊ ကိုပေဟေဂမ် ) - အုပ်စု၊ ရှုံးထွက်
Puskas Arena ( ဟန်ဂေရီ၊ ဘူဒါပတ်) - အုပ်စု၊ ရှုံးထွက်
Johan Cruyff Arena ( နယ်သာလန်၊ အမ်စတာဒမ်) - အုပ်စု၊ ရှုံးထွက်
Aviva Stadium ( အိုင်ယလန်၊ ဒပ်ဘလင်) - အုပ်စု၊ ရှုံးထွက်
Arena Nationala ( ရိုမေးနီးယား၊ ဘူခါရက်) - အုပ်စု၊ ရှုံးထွက်
ဟမ်ဒမ်ပတ်ခ် ( စကော့တလန်၊ ဂလက်စ်ဂို)၊ အုပ်စု၊ ရှုံးထွက်
San Mamés ( စပိန်၊ ဘီလ်ဘာအို) - အုပ်စု၊ ရှုံးထွက်
ယူရိုပြိုင်ပွဲကြီးကို ဥရောပ အဖွဲ့ချုပ်ဝင် နိုင်ငံပေါင်း ၅၅နိုင်ငံက ခြေစစ်ပွဲ ဝင်ကြရပြီး ကိုဆိုဗို အသင်းကတော့ ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ် ဝင်ရောက် ယှဉ်ပြိုင်တာပါ။ ခြေစစ်ပွဲတွေကို နိုင်ငံတကာ ပွဲတွေရှိတဲ့ အပတ်တိုင်း ကစားလာခဲ့ကြတာ အခုဆိုရင် ခြေစစ်ပွဲအောင်ထားတဲ့ အသင်းတွေ အများကြီး ရှိနေပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ အစောဆုံး အောင်ထားတဲ့ အသင်းက လက်ရှိ နံပါတ်၁ အသင်းဖြစ်တဲ့ ဘယ်ဂျီယံပါ။ အဲ့ဒီနောက် အီတလီ၊ ရုရှား၊ ပိုလန်၊ ယူကရိန်း၊ စပိန်၊ တူရကီ၊ ပြင်သစ်၊ အင်္ဂလန်၊ ချက်၊ ဆွီဒင်၊ ခရိုအေးရှား၊ သြစတြီးယား၊ နယ်သာလန်၊ ဂျာမနီ၊ ဖင်လန်တို့ပဲ ဖြစ်ကြပါတယ်။ ဂျာမနီက ယူရိုပြိုင်ပွဲကို ၁၂ကြိမ်အထိ ခြေစစ်ပွဲ အောင်ခွင့်ရခဲ့ပြီး အများဆုံး အသင်းဖြစ်သလို ဖင်လန်ကတော့ ဒီနှစ်မှာ ပထမဆုံးအကြိမ် ခြေစစ်ပွဲ အောင်တဲ့ အသင်းဖြစ် မှတ်တမ်းဝင်လာတာပါ။
ယူရို ခြေစစ်ပွဲတွေကနေ အသင်းပေါင်း ၂၀ ခြေစစ်ပွဲ အောင်ခွင့်ရမှာဖြစ်ပြီး အသစ် ပြုလုပ်တဲ့ နေးရှင်းလိဂ်ကနေ ၄သင်း ဝင်ခွင့်ရမှာဖြစ်လို့ ဥရောပရဲ့ အဆင့်သတ်မှတ်ချက် နိမ့်တဲ့ အသင်းငယ်တွေကလည်း ယူရိုပြိုင်ပွဲကြီးကို ဝင်ခွင့်ရဖို့ မျှော်လင့်ချက်ရှိနေဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ နေးရှင်းလိဂ်မှာ ပေါ်တူဂီ အသင်း ဗိုလ်စွဲ ထားပေမယ့် ယူရို ခြေစစ်ပွဲ တိုက်ရိုက် အောင်ခွင့်မရသေးဘဲ အနည်းဆုံး Play-Offs အဆင့်ကို ဝင်ခွင့်ရထားပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ နေးရှင်းလိဂ်ကနေ ဆုံးဖြတ်မယ့် Play-Offs အဆင့်ကိုတော့ ဘီလာရုစ်၊ မက်ဆီဒိုးနီးယား၊ ဂျော်ဂျီယာ၊ ကိုဆိုဗို၊ စကော့တလန်၊ နော်ဝေး၊ ဘော့စနီးယား၊ အိုက်စလန်တို့ ဝင်ခွင့်ရထားကြပြီး နောက်ထပ် ၈နေရာကို စောင့်နေကြတာပါ။ အဲ့ဒီ ၁၆သင်းကတော့ အဆင့်သတ်မှတ်ချက်အလိုက် ဆီမီးဖိုင်နယ်၊ ဖိုင်နယ်အဖြစ် ကစားပြီး နောက်ဆုံး လက်ကျန် ခြေစစ်ပွဲအောင်မယ့် ၄သင်းကို ရွေးချယ်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
၁၉၉၆ ယူရို ချန်ပီယံ ဂျာမနီဟာ ၃ကြိမ်နဲ့ ပူးတွဲ အအောင်မြင်ဆုံး အသင်းလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
ယူရို ချန်ပီယံ အောင်မြင်မှုများ
၁) ဂျာမနီ - ၃ကြိမ် ( ၁၉၇၂၊ ၁၉၈၀၊ ၁၉၉၆)
၂) စပိန် - ၃ကြိမ် ( ၁၉၆၄၊ ၂၀ဝ၈၊ ၂၀၁၂)
၃) ပြင်သစ် - ၂ကြိမ် ( ၁၉၈၄၊ ၂၀ဝ၀)
၄) ဆိုဗီယက်ယူနီယံ - ၁ကြိမ် ( ၁၉၆၀)
၅) အီတလီ - ၁ကြိမ် ( ၁၉၆၈)
၆) ပေါ်တူဂီ - ၁ကြိမ် ( ၂၀၁၆)
၇) ချက် - ၁ကြိမ် ( ၁၉၇၆)
၈) နယ်သာလန် - ၁ကြိမ် ( ၁၉၈၈)
၉) ဒိန်းမတ် - ၁ကြိမ် ( ၁၉၉၂)
၁၀) ဂရိ - ၁ကြိမ် ( ၂၀ဝ၄)
ခြေစစ်ပွဲ အောင်ထားတဲ့ အသင်းများ
ဘယ်ဂျီယံ - ၅ကြိမ်
အီတလီ - ၉ကြိမ်
ရုရှား - ၁၁ကြိမ်
ပိုလန် - ၃ကြိမ်
ယူကရိန်း - ၂ကြိမ်
စပိန် - ၁ဝကြိမ်
တူရကီ - ၄ကြိမ်
ပြင်သစ် - ၉ကြိမ်
အင်္ဂလန် - ၉ကြိမ်
ချက် - ၉ကြိမ်
ဖင်လန် - ပထမဆုံးအကြိမ်
ဆွီဒင် - ၆ကြိမ်
ခရိုအေးရှား - ၅ကြိမ်
သြစတြီးယား - ၂ကြိမ်
နယ်သာလန် - ၉ကြိမ်
ဂျာမနီ - ၁၂ကြိမ်
อัลบั้มภาพ ဥရောပ နိုင်ငံတွေမှာ ပူးတွဲ ကျင်းပမယ့် ယူရို ၂၀၂၀ ပြိုင်ပွဲ